ICiudadanos iphakamisa izinguquko ku-NHP ukuze zivumelane nokushintsha kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngokuya ngesimo sesomiso iSpain esihlupheka ngaso, iqembu lePhalamende lezakhamizi lethule isiphakamiso esingewona umthetho (NLP) sokuguqula nokuguqula uHlelo Lukazwelonke Lokuphehla Amandla Ngamanzi lokushintsha kwesimo sezulu Lezi zinguquko zinenqubo ebanzi yokubamba iqhaza komphakathi.
Ufuna ukuguqula kanjani uHlelo Lukazwelonke Lwezamanzi lapho ubhekene nezimo zesomiso ezingezinhle ezidalwa ukuguquka kwesimo sezulu?
1 Ukujwayela ukuguquguquka kwesimo sezulu nokuphepha kwamanzi
2 Izindawo zokusebenza
Ukujwayela ukuguquguquka kwesimo sezulu nokuphepha kwamanzi
Kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuphepha kwamanzi ezweni lonke. Njengoba sibhekene nesimo esibangelwe ukuguquka kwesimo sezulu nokwanda kwesilinganiso sesomiso (sesivele sibonile ukuthi unyaka we-2017 kube unyaka wesibili omile futhi ufudumele kakhulu kusukela ngo-1965), uCiudadanos uphakamisa uchungechunge lwemikhombandlela ukuguqula uhlelo lwe-Hydrological Plan Kuzwelonke.
Okhulumela le mpikiswano ku iKhomishani Yokuguqula Isimo Sezulu, uMelisa Rodríguez, ukuqinisekisile ukuthi ukufudumala kwembulunga yonke kuyingozi okufanele ithathwe ngokungathi sína, ngoba imiphumela siyibona kakade. Ukuze wenze okuthile ukuze kuzuze zonke izakhamizi zaseSpain, kubalulekile ukwakha nokuthuthukisa indlela evuselelwe yenqubomgomo endala enamanzi ezweni.
Iziphakamiso zomnyakazo wokujwayela ukuguquguquka kwesimo sezulu kumele zenziwe ngezigaba ezimbili: isikhathi esifushane, ngonyaka ka-2030, nesikhathi eside ngo-2050.
Ngaphezu kokuqinisekisa ukuphepha kwamanzi ezweni, kufanele kwenziwe ngezindleko ezifanele. Izenzo kumele zinqobe izimo ezingezinhle ezidalwa ukuguquguquka kwesimo sezulu, hhayi nje kuphela ngenxa yesomiso, kodwa futhi ngenxa yokwanda kwamazinga okushisa, izimvula ezinamandla kanye nokuhwamuka okwandayo nemililo yehlathi.
I-NLP ayiphakamisi izindlela ezithile, kepha iphakamisa izindawo eziyishumi zokusebenza, kufaka phakathi ukucaciswa kukazwelonke kwemithombo yamanzi umongo wokungaqiniseki kwesimo sezulu; ukunakekelwa nokongiwa kwemisebenzi yokubacindezela kanye nokufakwa kokusebenza; ukuzwa usawoti emanzini; izindleko zamanzi noma ukusebenzisana komphakathi nezizimele emkhakheni wamanzi.
Izindawo zokusebenza eziphakanyiswe yiCiudadanos ukuguqula uHlelo lwe-Hydrological Plan yilezi ezilandelayo:
Value amanzi njengento edingekayo, eyindlala futhi esiza umphakathi kanye nesimo sayo sezomnotho, ngokuhlonza, ukuxilonga kanye nokuhlola ukutholakala kanye nezinkinga okufanele sibhekane nazo nokuguquka kwesimo sezulu.
Kwakhiwe kabusha amathuluzi okuphatha nokuphatha amanzi asebenza kangcono esimeni sokungaqiniseki kwesimo sezulu. Lokhu kuphakamisa izinkinga eziningi maqondana nobudlelwano phakathi kwamachibi e-hydrographic kanye nokuphathwa komphakathi womphakathi ngamunye ozimele.
Lungisa zonke izingqalasizinda lapho kugcinwa khona futhi kuthuthwa amanzi ngaphansi kwezimo ezidingekayo ngokushintsha kwesimo sezulu. Izenzo ezifana nokulungisa kabusha ingqalasizinda nokuguqula ukusebenza kwezinye izigaba kuyaqoqwa.
Gcina futhi ulondoloze imisebenzi nezinsiza ezisezinsizakalweni, maqondana nezidingo zokuphepha nokuqina kohlelo lwamanzi. Ukunakwa ngokukhethekile amadamu (okulahla udoti, ukuchithwa kwemithi nokuphepha kwamadamu) nezinhlelo zokusabalalisa (ukulawula ukulahleka).
Khulisa ukukhiqizwa kwamanzi okungewona wemvelo eSpain, njengalawo aqhamuka ekususeni usawoti. Ukwenza ngcono isivuno kanye nezindleko zokukhishwa kwamanzi emanzini. Ukuphakanyiswa kokusetshenziswa kwamanzi angcolile abuyiselwe ukusetshenziswa kokunye okungasetshenziswa ngabantu.
La ukubambisana komphakathi nezizimele emkhakheni wamanzi. Indima yayo ekuhlinzekweni kahle kwengqalasizinda ye-hydraulic, ukusebenza kwayo nokuphathwa kokusetshenziswa. Umthetho wezomthetho. Amanzi, intuthuko kanye nemodeli yezomnotho.
Ukwandisa ukuphathwa kwezinsizakalo zamanzi emadolobheni.
Lawula izindleko nezintengo zamanzi.
Khulisa ukwenziwa kwezinto ezintsha kanye nokwakhiwa kobuchwepheshe obuthuthukisa umjikelezo wamanzi nokusetshenziswa kwamanzi, ukuphatha nokwenza ngcono ama-aquifers ngokuhlela okungcono kwezitshalo.
Ukukhiqizwa kukagesi okuvela emanzini agciniwe ukukufaka ekuguqulweni kwamandla eSpain.
Ngayo yonke le mishini ezobhekana nayo, uCiudadanos uthemba ukuthi uzokwazi ukwenza ngcono uHlelo Lukazwelonke Lwezamanzi lapho kubhekene nokuguquka kwesimo sezulu, ngoba kuya ngokuya kwethusa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » ICiudadanos iphakamisa ushintsho ku-PHN ukujwayela ukuguquka kwesimo sezulu